အမရေိကနျ ဒျေါလာ $100 တနျ အတုအစဈ ဘယျလို ခှဲမလဲ…? – Nyi Ma Lay
အမရေိကနျ ဒျေါလာ $100 တနျ အတုအစဈ ဘယျလို ခှဲမလဲ…?
By Nyi Ma LayPosted on October 14, 2021
ဒျေါလာဆိုတာ လူတို ငျးမွငျဖူးကွားဖူး ကွမှာပါ။ အတုအ စဈတော့ လူတိုငျးခှဲတ ကျလိမျ့မယျ မထငျပါဘူး။တကယျလို့မြား လကျထဲရောကျ လာခဲ့ရငျ စဈဆေးကွညျ့လို့ ရအောငျပါ။
ဒျေါလာ $100 တနျ က ပုံစံ အဟောငျးတှေ၊ အသဈတှေ ရှိပါတယျ… အခုပွောပေးမှာက 2013 ကနေ အခုလကျရှိထိ ထုတျထားတဲ့ ပိုကျဆံ အသဈတှေ အတှကျ ဖွဈပါတယျ… အောကျပါ ၅ နရောကို စဈဆေးပေးရပါမယျ။
ပိုကျဆံကို နောကျကနေ မီးရောငျ သို့မဟုတျ ဓာတျမီး နဲ့ ထိုးကွညျ့ပါ။ အထဲမှာ လုံခွုံရေးကွိုးကို တှရေ့ပါမယျ။ အဲ့ကွိုးထဲမှာ “100” ရယျ၊ “USA” ရယျဆိုပွီး တလှညျ့ဆီ ရေးထားပါလိမျ့မယျ။ ခရမျးလှနျရောငျခွညျမီး (UV Light) နဲ့ထိုးကွညျ့မယျဆိုရငျတော့ ကွိုးက ပနျးရောငျ အဖွဈပွောငျးသှားရပါမယျ။
၂။ ဖောငျးကွှ လုံးခွုံရေးကွိုး
သူကတော့ သိသိသာသာကို မွငျတှနေို့ငျပါတယျ။ ထူးခွားခကျြက အဲ့ကွိုးကို စိုကျကွညျ့ပွီး ပိုကျဆံကို ဘယျညာ လှုပျကွညျ့ကွညျ့ပါ။ အထဲက ခေါငျးလောငျးပုံရယျ၊ 100 စာသားလေးတှကေ အပျေါအောကျ ပွေးနကွေပါမယျ။ ထို့အတူ ပိုကျဆံကို အပျေါအောကျ လှုပျကွညျ့မယျဆိုရငျတော့၊ ခေါငျးလောငျးရယျ၊ 100 ရယျတှကေ ဘယျညာပွေးနကွေပါလိမျ့မယျ။ နောကျပွီး ဒီကွိုးက ပိုကျဆံပျေါမှာ ကပျထားတာမြိုးမဟုတျပဲ ပိုကျဆံအသား အတှငျးမှာ မွှုတျနတော ဖွဈရပါမယျ။
ပိုကျဆံကို လှုပျကွညျ့ရငျ အဲ့ခေါငျးလောငျးက အစိမျးရောငျလိုလို၊ ကွေးနီရောငျလိုလိုနဲ့ အရောငျပွေးနရေပါမယျ။ သူ့ နောကျခံ ကွေးနီရောငျ (မှငျအိုးပုံ) နဲ့ ရောရောသှားပွီး၊ ခေါငျးလောငျးက ပြောကျသှားလိုကျ၊ ပျေါလာလိုကျ မြိုး ဖွဈနရေပါမယျ။
ဒါကတော့ သိပျမထူးဆနျးပါဘူး။ အလငျးရောငျထဲ ထောငျကွညျ့ရငျ ရစောအနနေဲ့ Bamjamin ပုံပျေါလာရပါမယျ။
၅။ အရောငျပွေး 100
နောကျဆုံး စဈခိုငျးတဲ့နရောကတော့ အရောငျးပွေးနတေဲ့ 100 ဆိုတဲ့ စာသားပါ။ ပိုကျဆံကို လှုပျကွညျ့ရငျ အဲ့စာသားက အစိမျးရောငျလိုလို၊ ကွေးနီရောငျလိုလိုနဲ့ ပွေးနရေပါမယျ။ နောကျ လကျနဲ့ ပှတျကွညျ့ရငျ အဲ့စာလုံးတှေ ဖောငျးကွှဖွဈနတေဲ့ အရသာမြိုးကို ခံစားနိုငျမှာပါ။
ဒီနတေ့ော့ ဘာရယျ မဟုတျဘူး ဒျေါလာ အတု အစဈ ဘယျလိုခှဲတယျ ဆိုတာ US အစိုးရ ကိုယျတိုငျ ဘယျလို ညှနျကွား ထားတယျဆိုတာ သိခငျြလာ တာနဲ့ ရှာဖတျွ ကညျ့မိပွီး ဒီ Post လေး ရေးဖွဈလိုကျပါတယျ။ ပိုကျဆံတှေ သုံးနကွေပမေယျ့ ဒီလို စနဈတကြ စဈဆေးပုံ ကိုတော့ အခုမှ သငျယူမိလို့ အသုံးတညျ့တယျ ထငျလို့ပါ။ အသုံးလညျးတ ညျ့နိုငျကွပါစေ။ ပညာဒါနပေါ့။
ဒေါ်လာဆိုတာ လူတို င်းမြင်ဖူးကြားဖူး ကြမှာပါ။ အတုအ စစ်တော့ လူတိုင်းခွဲတ က်လိမ့်မယ် မထင်ပါဘူး။တကယ်လို့များ လက်ထဲရောက် လာခဲ့ရင် စစ်ဆေးကြည့်လို့ ရအောင်ပါ။
ဒေါ်လာ $100 တန် က ပုံစံ အဟောင်းတွေ၊ အသစ်တွေ ရှိပါတယ်… အခုပြောပေးမှာက 2013 ကနေ အခုလက်ရှိထိ ထုတ်ထားတဲ့ ပိုက်ဆံ အသစ်တွေ အတွက် ဖြစ်ပါတယ်… အောက်ပါ ၅ နေရာကို စစ်ဆေးပေးရပါမယ်။
ပိုက်ဆံကို နောက်ကနေ မီးရောင် သို့မဟုတ် ဓာတ်မီး နဲ့ ထိုးကြည့်ပါ။ အထဲမှာ လုံခြုံရေးကြိုးကို တွေ့ရပါမယ်။ အဲ့ကြိုးထဲမှာ “100” ရယ်၊ “USA” ရယ်ဆိုပြီး တလှည့်ဆီ ရေးထားပါလိမ့်မယ်။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်မီး (UV Light) နဲ့ထိုးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ကြိုးက ပန်းရောင် အဖြစ်ပြောင်းသွားရပါမယ်။
၂။ ဖောင်းကြွ လုံးခြုံရေးကြိုး
သူကတော့ သိသိသာသာကို မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ထူးခြားချက်က အဲ့ကြိုးကို စိုက်ကြည့်ပြီး ပိုက်ဆံကို ဘယ်ညာ လှုပ်ကြည့်ကြည့်ပါ။ အထဲက ခေါင်းလောင်းပုံရယ်၊ 100 စာသားလေးတွေက အပေါ်အောက် ပြေးနေကြပါမယ်။ ထို့အတူ ပိုက်ဆံကို အပေါ်အောက် လှုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့၊ ခေါင်းလောင်းရယ်၊ 100 ရယ်တွေက ဘယ်ညာပြေးနေကြပါလိမ့်မယ်။ နောက်ပြီး ဒီကြိုးက ပိုက်ဆံပေါ်မှာ ကပ်ထားတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ပိုက်ဆံအသား အတွင်းမှာ မြှုတ်နေတာ ဖြစ်ရပါမယ်။
ပိုက်ဆံကို လှုပ်ကြည့်ရင် အဲ့ခေါင်းလောင်းက အစိမ်းရောင်လိုလို၊ ကြေးနီရောင်လိုလိုနဲ့ အရောင်ပြေးနေရပါမယ်။ သူ့ နောက်ခံ ကြေးနီရောင် (မှင်အိုးပုံ) နဲ့ ရောရောသွားပြီး၊ ခေါင်းလောင်းက ပျောက်သွားလိုက်၊ ပေါ်လာလိုက် မျိုး ဖြစ်နေရပါမယ်။
ဒါကတော့ သိပ်မထူးဆန်းပါဘူး။ အလင်းရောင်ထဲ ထောင်ကြည့်ရင် ရေစာအနေနဲ့ Bamjamin ပုံပေါ်လာရပါမယ်။
၅။ အရောင်ပြေး 100
နောက်ဆုံး စစ်ခိုင်းတဲ့နေရာကတော့ အရောင်းပြေးနေတဲ့ 100 ဆိုတဲ့ စာသားပါ။ ပိုက်ဆံကို လှုပ်ကြည့်ရင် အဲ့စာသားက အစိမ်းရောင်လိုလို၊ ကြေးနီရောင်လိုလိုနဲ့ ပြေးနေရပါမယ်။ နောက် လက်နဲ့ ပွတ်ကြည့်ရင် အဲ့စာလုံးတွေ ဖောင်းကြွဖြစ်နေတဲ့ အရသာမျိုးကို ခံစားနိုင်မှာပါ။
ဒီနေ့တော့ ဘာရယ် မဟုတ်ဘူး ဒေါ်လာ အတု အစစ် ဘယ်လိုခွဲတယ် ဆိုတာ US အစိုးရ ကိုယ်တိုင် ဘယ်လို ညွှန်ကြား ထားတယ်ဆိုတာ သိချင်လာ တာနဲ့ ရှာဖတ်ြ ကည့်မိပြီး ဒီ Post လေး ရေးဖြစ်လိုက်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံတွေ သုံးနေကြပေမယ့် ဒီလို စနစ်တကျ စစ်ဆေးပုံ ကိုတော့ အခုမှ သင်ယူမိလို့ အသုံးတည့်တယ် ထင်လို့ပါ။ အသုံးလည်းတ ည့်နိုင်ကြပါစေ။ ပညာဒါနပေါ့။
Previous post တဈကမ်ဘာ လုံးက ရခေဲတောငျတှအေကုနျ အရညျပြျောသှားခဲ့ရငျ ဘာတှဖွေဈလာမလဲ……..
Next post ကြှဲ/နှား မြားအတှကျ အဖိုးတနျ ဆေးဖကျဝငျ ဗီလား(သို့) ဗီလား တဈကောငျ ကြှဲတဈထောငျ